1500 kiis oo Shuban ah oo laga helay Soomaaliya. | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta 1500 kiis oo Shuban ah oo laga helay Soomaaliya.
1500 kiis oo Shuban ah oo laga helay Soomaaliya.
Wasaaradda Caafimaadka ee dowladda Soomaaliya iyo Hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan caafimaadka adduunka ee WHO ayaa war ka soo saaray Shuban biyoodka ka dilaacay guud ahaan dalka Soomaaliya.
Warbixinta wasaaradda Caafimaadka iyo ha’adda WHO ayaa lagu sharxay kiisaska iyo dhimashada uu sababay shubanka inta aynu ku guda jirno sanadkan 2017 ka gaar ahaan bishii aynu soo dhaafnay ee Febraayo.
Gobalka Bakool: Hay’adda ayaa Sheegtay in la helay 212 kiis oo shuban ah kuwaasi oo sababay dhimashada 36 qof.
Gobalka Baay: waxaa la wariyay in 657 kiis oo shuban ah kuwaasi oo sababay geerida 41 qof. Goobaha shubanka uu ku dhuftay ayaa waxaa ay ku sheegeen Bayhaw, Aliyow Mumin, Nesboy, G. Burey iyo Buurrhakaba.
Gobalka Banaaadir: waxaa la sheegay in 17 degmo lagu arkay kiisas Shuban ah kuwaasi oo gaaraya 169 waxaa la wariyay hal dhimasho oo kali ah. Degmooyinka sida adag uu shubanka ugu dhuftay waa Hodan iyo Dharkinley.
Hiiraan: wasaaradda Caafimaadka iyo Hya’adda WHO waxaa ay sheegeen in Hiiraan lagu arkay 14 kiis oo shuban ah wax dhimasho ah lama soo sheegin.
Shabeelaha Hoose: 67 kiis oo shuban ah iyo hal qof oo dhimasho ah ayaa laga soo sheegay, waxaana lagu arkay shubanka degmooyinka kala ah Afgooye Janaale Qoryooley iyo Marka.
Shabeelaha Dhexe: 83 kiis wax dhimasho ah lama soo sheegin. Shubanka ayaa lagu arkay Jowhar, Mahadaay iyo Xawaadley.
Jubada Hoose: 72 kiis hal dhimasho ayaa laga soo sheegay.
Barri: 74 kiis iyo Seddex Dhimasho ah. Mudug: Shan kiis oo kali ah ayaa laga soo sheegay magaalada Gaalkacyo.
Nugaal: 149 kiis iyo 16 dhimasho ah ayaa waxaa laga soo sheegay xerada barakacaayasha ee Jawle
Previous articleShuban biyood 69 qof ku dilay gobalka Baay
Next articleMadaxwaynihii hore ee Soomaaliya oo la dhaariyay